UMotaung uqinise uMashiane idolo ngekhadi eliqhathe iChiefs nenduku
July 21, 2021 July 21, 2021 Impempe.com
Usihlalo weKaizer Chiefs, uKaizer Motaung usegqugquzele uHappy Mashiane ukuthi angakuvumeli kumthikameze emoyeni ukuthola kwakhe ikhadi elibomvu emdlalweni wamanqamu kwiCAF Champions League.
UMashiane ukhishwe ngekhadi elibomvu ngemuva kokudlalisa kabi umdlali we-Al Ahly kungenasidingo ngasekupheleni kwesiwombe sokuqala.
Abaningi bakhala ngokuthi lokhu kwaphazamisa izinhlelo zeqembu kwaqhatha iqembu nenduku. IChiefs igcine ihlulwe ngo 3-0 kulo mdlalo obuseStade Mohammed V enhlokodolobha yaseMorocco, iCasablanca.
“Ngifisa ukuthatha leli thuba ngibongele iqembu ngomzamo walo omangalisayo wokuwina iCAF Champions League. Yize singayiwinanga indebe, ukufika kowamanqamu kukodwa nje kuwumlando omuhle kuleli qembu,” kusho uMotaung.
“Kuyishwa nje ukuthi ikhadi elibomvu yilo elibe nomthelela emphumeleni walo mdlalo. Kodwa izinto ezinjengalezi ziyenzeka emidlalweni emikhulu ngalolu hlobo. Ngibonga abadlali nethimba labaqeqeshi, ngingabakhohlwa nabanye abasebenza eminye imisebenzi eqenjini abebekhona kulolu hambo lomdlalo wamanqamu.
“Ngifuna ukubhekisa ngokukhethekile lomlayezo kuHappy Mashiane. UHappy kumele athathe lokhu okwenzekile njengesifundo esizomsiza ebholeni lakhe ngokuzayo.
” Akulona iphutha lakhe lokhu okwenzekile futhi lokhu kumele kumele kube yisifundo kuwo wonke umuntu eqenjini. Kumele sazi ukuthi izinto ezinjena ziyenzeka ebholeni nasempilweni nje. UHappy usemncane futhi unekusasa elihle elimlindile. Akayedwa kulento, sinaye sonke,” kusho uMotaung.
Izinhlelo zeChiefs zokubuyela ekhaya ziphazamisekile ngemuva kokuthi indiza obekumele babuye ngayo ibe nezinkinga. Lokhu kuholele ekutheni uhambo luhlehliswe njengoba seyizoze itheleke kuleli ngoLwesithathu.
FUNDA NALA: Usihlalo weMaritzburg useshaya izaququ ngokudayisa iqembu ebe akuvuma yena
UMotaung uveze ukuzwelana kwakhe nethimba ebeliseMorocco ngalokhu, wathi ubafisela ukuba baphephe endleleni yabo ebuyela ekhaya. Abasondelene neqembu bathe uMotaung uzoba nengxoxo ekhethekile neqemnbu uma selibuyile lapho ezolibonga khona kahle.
Uzobe esephinde abe nomhlangano okhethekile noMashiane ukuze ameluleke njengomzali ukuze lokhu ukumehlele kungamudli ngaphakathi. UMashiane waphuma enkundleni ekhala mi izinyembezi ngemuva kokuthola leli khadi.
Previous Previous post: UKadodia usebuye wajika nje, wakuvuma ukuthi uyayidayisa iMaritzburg
Next Next post: USibisi useyiBhakabhaka, uMlungwana yena sekusele kancane